कोरोना जोखिमबीच खुल्न थाले विद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ : केही भए जिम्मेवारी कसले लिने? – Health Post Nepal
कोरोना जोखिमबीच खुल्न थाले विद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ : केही भए जिम्मेवारी कसले लिने?
२०७८ भदौ १७ गते ८:००
कोभिड–१९ को दोस्रो लहर फैलिएसँगै बन्द गरिएका विद्यालय जोखिम कायम रहेकैबीच खुल्न थालेका छन्। स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालय खुल्न थालेका हुन्।
सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रही भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न थालिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासनले पनि स्थानीय तह र जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्यालय खोल्न दिने निर्णय गरिसकेका छन्।
यता शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मन्त्रालयले जोखिम कायम रहेको अवस्थामा विद्यालय खोल्दा आउनसक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहले विद्यालय संचालनको मापदण्ड तयार गरी अभिभावकसँग छलफल गरी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थित गराएर विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालय भन्छ : जोखिमलाई पनि ख्याल गरौं
स्थानीय तहहरुले धमाधम स्कुल सञ्चालनको निर्णय गर्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले पनि जोखिमको अवस्था हेरेर मात्रै विद्यालय खोल्न आग्रह गरेकाव छ।
हेल्थपाेष्टसँग कुराकानी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसीएमसी) ले पनि विद्यालय सञ्चालनका विषयमा कार्ययोजना माग गरेको बताए।
यद्यपि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। तर, जोखिमलाई ख्याल गरेर मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न उनले आग्रह गरे।
शर्माकाअनुसार सरकारले गर्ने लकडाउनको चार प्रकृतिअनुसार पठनपाठनका गतिविधि अघि बढाउन सकिने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेर सिसिएमसीमा पेस गरेको छ। सम्भवतः चाडैँ निर्णय आउने उनले बताए।
हार्ड (रातो), मिक्स्ड (गाढा पहेंलो), सफ्ट (हल्का पहेंलो) र मिनिमल (हरियो) गरी चार क्षेत्र छुट्याइएको र कुन क्षेत्रमा कसरी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए।
जसअनुसार रातो क्षेत्रमा प्रधानाध्यापकसहित केही शिक्षक आलोपालो विद्यालय आउने र विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
गाढा पहेंलो क्षेत्रमा ५० प्रतिशत शिक्षक विद्यालयमा उपस्थिति भएर विद्यार्थीलाई समूहअनुसार सिकाइ सहजीकरण गर्ने तयारी छ। हल्का पहेंलो क्षेत्रमा शिक्षक विद्यालयमा उपस्थित भई विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।
विद्यार्थीलाई पनि स–साना समूह बनाएर मात्रै सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने योजना बनाइएको प्रवक्ता शर्माका भनाई छ।
प्रवक्ता शर्माकाअनुसार हरियो क्षेत्रमा विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचाअनुसार भौतिक उपस्थितिमा नै पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने कार्ययोजनामा उल्लेख रहेको छ। संक्रमणको जोखिम नरहेको वा कम रहेको स्थानमा आलोपालो सिफ्ट वा अन्य विधि प्रयोग गर्न सकिनेछ।
प्रवक्ता शर्माले वैकल्पिक माध्यमलगायत आलोपालो गरेर मात्रै कक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले विद्यालयहरूलाई सुझाव दिएको बताए। मन्त्रालयले विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्दा कार्यविधिको परिपालना गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।
सकिएको छैन जोखिम
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ७१ जिल्लामा ४ सय भन्दा माथि सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। २ सयदेखि ४ सयसम्म सक्रिय संक्रमित रहको जिल्ला एउटा र ५ वटा जिल्लामा १ सयदेखि २ सयसम्म सक्रिय संक्रमित रहेका मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
संक्रमित र सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि जोखिम अझै कायमै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीकाअनुसार बालबालिका अझै पनि जोखिममै रहेका छन्। ‘जोखिमको अवस्था टरेको छैन। यता विद्यालय खोल्ने निर्णय भइरहेको छ। केही तल–माथि भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?’, उनले प्रश्न गरे।
‘बालबालिका अझै जोखिममा छन्। खोपको अवस्था नि त्यस्तै छ। सबै बालबालिकाको पहुँचमा खोप छैन। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले विद्यालय खोलिहाल्न हतार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। पूर्णरुपमा बालबालिकामा खोप नलाइएसम्म वैकल्पिक उपाय नै उपयुक्त हुने थियो तर, विद्यालय खोल्न हतार गरिँदैछ।’, अधिकारीले भने।